Ogaden News Agency (ONA) – Ra’iisul Wasaaraha UK oo Sheegay Inuu Xilka Ka Dagi Doono Bisha Octoober, 2016.
Ra’iisul Wasaaraha UK oo Sheegay Inuu Xilka Ka Dagi Doono Bisha Octoober, 2016.
Ra’iisul Wasaaraha dalka Britain (Ingiriiska), David Cameron, ayaa shaaciyay inuu is casilayo bisha Oktoobar ee soo socota sanadkan aan kujirro, kadib markii dadweynaha UK ay u codeeyeen inay isaga baxayaan Midowga Yurub.
Mr. Cameron ayaa go’aanka is casilaaddiisa waxa uu ka jeediyay aqalkiisa Downing Street hortiisa kadib markii lagu dhawaaqay natiijada aftidii ka dhacday waddanka Khamiistii. Wuxuu sheegay in uu isku dayi doono in markabku aanu liicin – laakiin toddobaadyada iyo bilaha soo socda in loo baahan yahay hoggaan cusub oo wadanka Hogaamiya.
Mr. Cameron ayaa si weyn ugu ololeeyay in Britain ay kasii mid ahaato Midowga Yurub, waxaana uu sheegay in uu ixtiraamayo go’aanka shacabka dalkiisa ee ay ku muujiyeen natiijada aftida. Shacabka Britain ayaa u codeeyay inay iskaga baxaan Midawga Yurub.
Natiijada kasoo baxday rabitaanka shacabka Britain ayaa lasaadaalinayaa inay saamayn balaan ku yeelan doonto dhaqaalaha wadanka Britain, taasoo lasaadaaliyay inay si gaar ah u saamayn doonto maciishada caadiga ah.